Ma lagu qanci karaa xogta uu ka wado Fahad kiiska Ikraan? | KEYDMEDIA ONLINE
Ma lagu qanci karaa xogta uu ka wado Fahad kiiska Ikraan?
Fahad Yaasiin ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu soo gaaro Muqdisho, si uu uga qeyb galo shirka Amniga qaranka ee uu dhawaan ku dhawaaqay Madaxweynaha muddo xileedkiiso idlaaday ee Farmaajo, kaasoo lagu soo bandhigi doono xog ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil.
MUQDISHO, Soomaaliya- Kaddib markii rakaabkii saarnaa diyaaraddda Turkish Airlines, dowladda Jabuuti dib ugu celisay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo ay markii hore kasoo duushay ayaa gaartay dalka Turkiga.
Rakaabka diyaaradda oo uu qeyb ka ahaa Agaasimihii hore ee NISA, Fahad Yaasiin iyo saraakiil kale oo la socotay ayaa xubno ku dhaw sheegeen inay caafimaad qabaan oo aysan jirin wax dhibaato ah oo soo gaartay.
‘‘Goordhow waxaan Telefanka kula shekeystay La-taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya MD Fahad Yassin H. Dahir iyo saraakiisha safarka ku wehlisa iyaga oo ku sugan dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga. Dhammaantood waa caafimaad qabaan’’. ayuu ku soo qoray bartiisa Facebook, Cali Yare Cali oo ah guddoomiye ku xigeenka amniga ee gobolka Banaadir oo si weyn ugu adeega Farmaajo marka ay timaado baraha bulshada.
Guddiga Amniga qaranka, inkasta uu yahay mid kala dhantaalan, haddana waxaa lagu waddaa in ugu yaraan macluumaadkii uu ballanqaaday soo bandhigistooda taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin in maanta lasoo bandhigo waxyaabaha uu ka ogyahay kiiska Ikraan iyo sida ay ugu gacan gashay Al-shabaab, madama ay sidaa kol hore sheegtay NISA.
Lama oga sida uu shirkan ay ugu qanci karaan ehellada Ikraan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo ka walaacsan sida ay wax u wadaan Farmaajo iyo Kooxdiisa.
Guddigii uu magacaabay Farmaajo, ayaa waxaa ka horyimid qoyska Ikraan, taas oo muujineysa sida aysan ugu qanacsaneyn kooxda Farmaajo oo lagu tuhunsan yahay Ikraan.